HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo dooneysa inay lasoo saxiixato Moussa Diaby
October 1, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay u dhaqaaqi doonto saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Bayer Leverkusen ee Moussa Diaby inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Ibrahima Konate ayaa kaliya yimid Anfield ka hor xilli ciyaareedka cusub, kooxda Merseyside ayaa isku diyaarinaysa inay 40 milyan oo ginni ku qarash gareyso daafaca RB Leizpig.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa la filayaa inay noqoto mid aad u firfircoon inta lagu jiro 2022, oo laga yaabo inay ku jirto kaalinta saddexaad ee ugu dambaysa marka la eego hubin la’aanta rag badan oo muhiim ah.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Jurgen Klopp ayaa xiiseynaya inuu heshiis la gaaro xiddiga reer France Diaby.
Tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay Bundesliga sannadka 2019, 22-jirkan ayaa dhaliyay 12 gool iyo 18 caawin 66 kulan oo uu saftay.
Diaby wali waxaa ka harsan wax ka yar afar sano qandaraaskiisa, taasoo Leverkusen gelineysa boos adag oo ku saabsan mustaqbalkiisa.